K: ရွှေဒေါင်းတောင် မှ..
Day in the Life ofaCovid ER doctor-- - https://twitter.com/Craig_A_Spencer You needaTwitter acct. but accts like this worth following. Ppl are having to say their last good byes electronically...
Vale Arief Budiman (1941-2020): liberated intellectual in authoritarian times - Even years later, if I toldaJakarta taxi driver I used to teach at Satya Wacana, their face would light up: “Arief Budiman, very good!” The post Vale A...
နှရောသီ ဂေါကျသီးပွိုငျပှဲ_ May 2020 - ကိုယျမငျဘာဝငျထားတဲ့ အိမျနားက ဂေါကျကှငျးမှာ အခုလာမယျ့ တနင်ျဂနှေ May 17,2020 ကငျြးပမယျ့ ဂေါကျသီးပွိုငျပှဲ ဝငျပွိုငျဖို့အတှကျ စာရငျးပေးလိုကျပါပွီ။ ကိုရိုနာဗ...
Warning, graphic--what many women saiddj t did. - https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-sexual-assault-allegations-all-list-misconduct-karen-johnson-how-many-a9149216.html Im...
Myanmar or Burma? | Dr. Khin Aye | TEDxUM1Yangon -
Draw A Line for Covid-19 - *Draw A Line For Covid-19* *"Yesterday, Covid-19 seemed so far away..."* The Covid-19 virus infected first in Wuhan, China in December 2019. The WHO reco...
Immunization Schedule for the Elderly - Immunization Schedule for the Elderly Table 1. Recommended immunization schedule for adult age less than 65 (not included vaccination recommendation for fe...
Jane Austen's Brother Who Died in Burma - Portrait of Charles Austen, illustration by Kenneth Wong On October 6, 1852, Rear-Admiral Charles J. Austen, the 73-year-old naval Commander-in-Chief of Ea...
ဂြူနီယာဝငျး(ဘာသာပွနျသည်) - လော့ဒေါငျး ပုံပွငျ တပုဒျ - ဂြူနီယာဝငျး - လော့ဒေါငျး ပုံပွငျ တပုဒျ*(မိုးမခ) မေ ၅၊ ၂၀၂၀)* (Dave Scott (Kiffness) သိဆို စာသား ထညျ့သှငျး ရေးသားသော လော့ဒေါငျးကို ခံစားထားတဲ့ သီခငျြးတဈပ...
မဇ်ဇိမသို့ ခရီးသှားအတှအေ့ကွုံ ပ - မဇ်ဇိမ ဒသေကို မိသားစုလိုကျခရီးသှားခငျြတဲ့ စိတျကူးဟာ မရေဲ့ စိတျကူးပါ။ အသကျအရှယျရလာတာကွောငျး၊ ခြှတျယှငျးလာတဲ့ ကနျြးမာရေးကွောငျ့ တကွောငျး သူတို့ တှေ ခရီးသှာ...
နေအုံး .. အာရုံထဲမှာ စွဲထင်ကျန် နေခဲ့တဲ့ ၊ ဒီလို ပလ္လင်ကြီး နောက်တခု ရှိသေးသည်။ အဲဒီ တရုတ်နိုင်ငံ ပီကင်းမြို့တော် က၊ ပလ္လင်ကြီးဆီ ကိုတော့၊ လူကိုယ်တိုင် ရောက်ခဲ့ ခြင်း မဟုတ်။ နောက်ဆုံးဧကရာဇ်ကလေး ပုရီ က၊ အမြင်အာရုံတွေက တဆင့် ခေါ်သွားခဲ့ ခြင်းသာ။ စစ်တင်မက၊ စနစ်ပါ ရှုံးသွားခဲ့တဲ့၊ တရုတ် ပဒေသရာဇ် တွေရဲ့ နောက်ဆုံး ဘုရင် ကလေး ခမျာ၊ သူ ထိုင်ဖူး ခဲ့တဲ့၊ ပလ္လင်ကြီးဆီကို၊ စက်ဘီးကလေးစီးပြီး ၊ မကြခဏ လာကြည့် တတ်သည်။ လူလစ်တဲ့ အချိန် ပလ္လင်ကြီးပေါ်ကို တက် ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း အနားကို ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသားငယ်လေး တယောက်ကို ဒါ သူ ငယ်ငယ်က ထိုင်ဖူးတဲ့ ပလ္လင်ကြီး လို့ ပြောတော့ ယုံကြည်စရာ ဘယ်မှာ ရှိမလဲ။
ပုရီ အတွက်တော့..သမိုင်းဆိုတာ...မယုံနိုင်စရာ လောကဓံ တရားရဲ့ အလှည့်အပြောင်းတွေ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်း စာလေး တပုဒ်ပါ။ ရွှေဒေါင်းတောင် အွန်လိုင်း စာစောင် အတွက် အနည်းငယ် ပြန်လည် ပြင်ဆင် ရေးသား ထားပါတယ်။